Ma ogtahay Waqtigu in uu Qaali yahay? | KEYDMEDIA ENGLISH
Sanadku waa 4xilli, Gu, Xagaa, Dayr iyo Jiilaal, waana 12 Bilood, 48Usbuuc iyo 356 Maalmood. Waxaa waajib ah, sanad markuu dhamaado qofku inuu isweydiiyo sanadkaan baxay maxaan kasbaday ama korodsaday? Maxaan faaiiday? maxaanse khasaaray? Maxaa ii kordhay maxaa iga nuqsaamay? Qofkaan taas is weydiinin waa qof ka jaahilka ah, Ra'sumaalkiisa iyo meesha ay usocdaan, oo aan rabin inuu xaalkiisu tooso Jidka saxda ah bidhaansado.
Qofwalbana isagaa qora taariikh nololeedkiisa, maxaa yeelay taariikh nololeedku waxay ka samaysantaa waxaad qaban jirtay, shaqadaad badin jirtay, dadka aad lasaaxiibka ahayd iwm. Weyna dhib yartahay qofku inuu ogaado taariikhdiisu siday u egtahay, kaliya waa inuu habeenkii isweydiiyo maanta maxaan qabtay? 12-Saacadood ee isoo maray maxay iga sheegi doonaan? Maxaa Diiwaanka Malaa'igta maanta ii galay? Su'aalahaas haduu qofku sidaacad ah uga jawaabo, maalin walba, Usbuuc walba, Bil walba iyo Sanad walba, waxaa cad qofkaasi inuu ka bixi karo imtixaankii waqtiga.
Qofkaan taas kafikirina waa qof mugdi ku socda, waqtigiisa aan ka faa'idaysanin, qadarinah nicmada nolosha, waqtiga iyo caafimaadka ee uu Rabbi (swt) nasiiyay. Hadaba qofka bani aadamka ahi wuxuu leeyahay hal nolol ah, markuu Aduunyada ka tagana waxaa lagu soo xasuusan doonaa wuxuu ahaa ama qaban jiray, ee uu kasbaday, midaa lafteeda un buuna Rabbigii (swt) lahortagi doonaa. Waxaana laweydiini doonaa Alle wuxuu ku siiyay Nolol qaali ah, waqti aad kafaa'ideysan kartay, Caqli aad wax kugarato iyo Cilmi aad ku xaqiiqsan kartay dhabta iyo ciribta fiicani meesha ay kujirto.
Hadaba waxaa inoo cad qaybta hore inay tahay qayb tira ahaan aad uyar, balse tayadeedu aad usarayso, isla markaana ah qaybta aduunyada uleh ama ukeenta guulaha, faa'idada, horumarka, wax qabadka iwm.